Akụkụ nke M4tel SS1070 | Site na Linux
Akụkụ nke M4tel SS1070
El M4tel SS1070 ekwentị O nwere ezigbo njirimara maka obere ego o nwere, nke bụ naanị $ 1,849 na ego na kredit na $ 2,515 pesos.
M4tel abụghị akara ama ama, yabụ ọtụtụ na-ahọrọ nhọrọ ndị ọzọ, agbanyeghị nke a apụtaghị na ekwentị M4tel SS1070 adịghị mma, na ntụle ọ nwere ike bụrụ nhọrọ kachasị mma ebe ọ nwere ọnụ ala na ụfọdụ ngwa gụnyere.
na M4tel SS1070 atụmatụ Ha bụ: 5-inch ihuenyo, ọ nwere 1.3Ghz dual-core processor, 512MB RAM, 4GB n'ime ebe nchekwa. 8 megapixel igwefoto isi na 2 megapixel n'ihu igwefoto. Batrị ahụ bụ 2,000 mAh, zuru oke maka ụbọchị ojiji.
M4tel etinyela nchedo ihuenyo 2 maka SS1070, nke dịlarị na nke ọzọ dị ka onye na-anọchi ya, ọ gụnyekwara mpempe akwụkwọ mkpuchi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Akụkụ nke M4tel SS1070
Etu esi ede blọgụ na Jekyll
Atụmatụ nke Zuum M50